Tsimialonjafy sy Ambanin'Ampahamarinana :: Manomboka miverina eny amin’ ny tranony ireo fianakaviana nafindra • AoRaha
Tsimialonjafy sy Ambanin’Ampahamarinana Manomboka miverina eny amin’ ny tranony ireo fianakaviana nafindra
Niverina eny amin’ny tranony eny Ambanin’ Ampamarinana sy Tsimialonjafy sahady ireo fianakaviana nafindra toerana. Raha ny loharanom-baovao dia fianakaviana iraika amby telopolo tamin’ireo roa amby efapolo nafindra no efa namonjy ny tranony.
“Ekena fa misy ny fiverenan’ ireo olona amin’ny tranony. Ireo olona lavitry ny vato ireo niverina ireo fa tsy ireo fianakaviana nonina tamin’ny faritra mena. Misy amin’izy ireo mihitsy aza no mangataka hifindra eny amin’ny Village Voara Andohantapenaka ka rahampitso (Ndrl: anio) izahay dia hitondra fianakaviana maromaro eny an-toerana”, hoy Raharison Jean Claude, lehiben’ny fokontany Ambanin’Ampamarinana.
Tsy mbola azo antoka ny hipetrahan’ireo olona ireo amin’iny faritra iny satria mbola maro ireo vato atahorana hihotsaka. “Manahirana ity toe-draha- raha ity satria tsy azo terena amin’ny tiany sy ny sitrapony ireo olona ireo”, raha ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra.
Etsy an-kilany, mizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo tra-boina eny amin’ireo trano fonenana eny amin’ny Village Voara Andohantapenaka sy Iharinarivo Ambohidratrimo.
Raha ny eny Andohan- tapenaka dia fianakaviana efatra no efa nifindra eny amin’izao fotoana izao. Azo itoerana milamina ihany eny an-toerana na somary kely ary ny efitra. Misy jiro sy rano avy ireo efitra natokana hipetrahana.
“Milamina tsara aloha hatreto izahay. Madio ny toerana ary mandeha ny jiro ary misy ihany koa ny rano. Tsy misy ny fahasarotana fa miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana amin’ny toerana tokony hasiana anay indray”, hoy ny renim-pianakaviana iray tra- boina eny Andohantapenaka.
Nanolotra fanampiana, toy ny kojakojan-dakozia, lovia sy sotro fihinanana, fandriana vy ary vary mba hahafahan’izy ireo miaina ara-dalàna ny Bngrc. Mitohy kosa ny famitana ireo fanamboarana sy fanatsarana ny toeram-ponenana eny Iharinarivo. Efa tonga isan-tokantrano ny rano fisotro madio nanomboka ny zoma hariva lasa teo, ny famatsiana ny herinaratra kosa dia efa eo am-pikarakarana ny antontan- taratasy. Fianakaviana folo no efa nifindra mitoetra eny ankehitriny. Ny lafiny fitaterana sy ny tsena no mbola manahirana azy ireo ka andrasana vahaolana amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny izany.
“Hatreto mbola tsy misy fitateram-bahoaka hatrany Ambohidratrimo mankaty amin’ity toerana ity mitatitra anay. Misy tsena kely ihany ety fa voafetra ny zavatra afaka jifaina”, hoy i Hary, renim-pianakaviana tra-boina eny Iharinarivo.
Fanatsarana ny fanabeazana Ho maimaim-poana ny fidirana eny amin’ny sekolim-panjakana
Tsimialonjafy sy Ambanin’Ampahamarinana :: Manomboka miverina eny amin’ ny tranony ireo fianakaviana nafindra - ewa.mg dit :
[…] Tsimialonjafy sy Ambanin’Ampahamarinana :: Manomboka miverina eny amin’ ny tranony ireo fian… est apparu en premier sur […]
Halatra :: Tratra teo am-bavahady ity lehilahy nandroba tranona masera